Nhau - nezve ICF (yakasungirirwa kongiri template)
ICF, Yakasungwa Konkrete Fomu, muChina vanhu vanoidanawo kuti yakadzivirirwa EPS module kana EPS mabhuroko. Zvinoitwa EPS chimiro Kuumbwa muchina uye ICF muforoma. Rudzi urwu rweEPS module inoshanda zvakanyanya mukupisa kupisa uye kuputira inzwi. Kwakaedzwa kuti kuchengetedzwa kwesimba kwezvivakwa zvakagadzirwa neICF mabhuroko kunogona kusvika kusvika 65%. EPS ICF inovhara haingopa chete inoshanda nzira yekuvaka yekunze kuputira kwemadziro munzvimbo dzinotonhora, asi zvakare inogadzirisa matambudziko ekuvaka akadai sekumeso ekunze ekunamatira pamadziro, uye yakareba nguva yekuvaka. Iyo ICF module yekuvaka iri nyore uye inokurumidza, rurimi-uye -groove kubatana pakati pemamojuru kunoita kuti kubatana kwacho kusunge kwazvo. Dovetail grooves pane ICF module inogonesa iyo plaster dhaka yakanyatso kunamatira kune EPS module.
EPS ICF ma module ikozvino chigadzirwa chakakurumbira mumunda wedu wekuvaka.
Zvichienzaniswa nezvidhinha zvevhu zvetsika, zvakanakira izvi ndezvi:
1.Save mari: Vanhu vanofunga kuti EPS simba-yekuchengetedza mamodule anodhura kupfuura zvakajairika ivhu zvidhinha. Muchokwadi, huremu hwemadziro ePSP hwakareruka, izvo zvinogona kudzikisira mutengo wekutanga, kuwedzera nzvimbo yekushandisa, chengetedza murume-simba, chengetedza zvinhu, uye mutengo wese uri nani pane kushandisa zvidhinha zvevhu.
2.Save nguva: kuvakwa kweimba kuri kukurumidza. 6 vanhu vanogona kupedzisa kuvakwa kukuru kweiyo 150 mita mita yemba (kusanganisira yedenga kongiri) mukati memazuva manomwe, uye vozoita kushongedza. Nguva yese yekuvaka haipfuure mwedzi mitatu.
3.Labor kuchengetedza: yakapusa dhizaini uye yakaderera yebasa kusimba. Kunyange madzimai epamba anokwanisa kuvaka dzimba zviri nyore sekuvaka mabharanzi vachitungamirwa nevashandi vehunyanzvi.
4.Energy yekuchengetedza uye emission rutapudzo: yakanaka yekupisa kuputira maitiro, inodziya muchando uye inotonhorera muzhizha. MuNorth China, nekuda kwekushisa kwakadzika munguva yechando, kudziyisa sisitimu kunogara kuchishandiswa paimba dzese. ICF module yakavakirwa dzimba dzinobatsira kudzikisa matatu-mana emota yekupisa mumaruwa, zvichinyatso kudzora kushandiswa kwemarasha uye utsi uye guruva kubuda.
5.Simba rakasimba uye yakasimba kudengenyeka kwenyika. Mushure mekushandisa EPS ICF matombo mukuvaka, yakajairika zvidhinha chimiro chakashandurwa kuita chakasimbiswa kongiri mamiriro pasina kuwedzera mutengo, uye simba rekudengenyeka rakawedzerwa ka7 nguva. Zvinoenderana nekuyedzwa kwe Earthquake Testing Center, kana ukuru hwacho huri pamusoro pe 8 degrees, kushanduka kwechivako kwacho hakukuvadze, uye kana simba radzikira pamadhigirii masere, muviri mukuru wechivakwa hauna kukuvara.
Tichifunga nezve pamusoro apa, ICF module yakavakwa zvivakwa inoita kuti usanetseka-pasina. Iyo EPS ICF yekuvakisa module inodambura echinyakare chivakwa modhi uye inozadzisa chinangwa chekusvibira chivakwa uye girini hupenyu, toti, yakaderera kabhoni kubuda, kuchengetedza simba uye kupisa kwemafuta, kuchengetedza kwezvakatipoteredza nekusimba, uye kukwirira kwekudzikisira. Iyo sarudzo yakanaka kana uchigadzira zvivakwa zvitsva.